Xiddig hore kooxda Juventus ah oo fariin uu u diray Pogba ka farxisay taageerayaasha – Gool FM
Xiddig hore kooxda Juventus ah oo fariin uu u diray Pogba ka farxisay taageerayaasha
Dajiye January 19, 2022
(Turin) 19 Jan 2022. Xiddigii hore khadka dhexe xulka qaranka Talyaaniga ee Claudio Marchisio ayaa fariin u diray saaxiibkiis hore ee Paul Pogba.
Claudio Marchisio ayaa si maldahan u sheegay inuu doonayo inuu markale arko xiddiga reer France ee paul Pogba oo xiran maaliyadda kooxda Juventus.
Waxaa xusid mudan in xiddigaha Paul Pogba iyo Claudio Marchisio ayaa fariimo jees jees ah isku dhaafsaday baraha bulshada.
Marchisio ayaa fariin cad u qoray ciyaaryahanka khadka dhexe ee Manchester United si uu ugu soo laabto Juve, wuxuuna yiri: “Waad garanaysaa jidka.”
Labadan ciyaaryahan ayaa ku wada ciyaaray Turin intii u dhaxaysay 2012 ilaa 2016, waxayna ahaayeen saaxiibo wanaagsan sannadihii la soo dhaafay, sidaa darteed Pogba ayaa fariin muuqaal ah u soo duubay Marchisio.
Fariin Marchisio kaga timid xiddiga xulka qaranka France iyo kooxda Manchester United ayaa lagu yiri:
“Aad baan kuugu xiisay saaxiibkay, salaan ayaan ku leeyahay, Principe.”
Marchisio ayaa ku jawaabay qaab ka dhigtay in jamaahiirta Juventus ay ka wada hadlaan, gaar ahaan maadaama uu xiddiga heerka caalami ee dalka France noqon doono ciyaaryahan xor ah marka uu qandaraaskiisa Manchester United dhaco 30ka June, markaas oo uu koox kasta ugu saxiixi karo si bilaash ah.
Taageerayaasha kooxda juventus ayaa si weyn ula falgalay fariinta jawaabta ah uu Marchisio u diray saaxiibkiis hore ee Paul Pogba taasoo ahayd:
“Waad garanaysaa jidka waana ku sugaynaa.” iyadoo taageerayaasha ay tilmaameen inay sidoo kale sugayaan Pogba inuu ku soo laabto magaalada Turin iyo kooxda marwada duqda.
Xavi Hernández oo si cad kaga hadlay mustaqbalka Ousmane Dembélé ee Barcelona